ဓါးတရား The end | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဓါးတရား The end
ဓါးတရား The end
Posted by မောင် ပေ on Sep 24, 2011 in Creative Writing, My Dear Diary, Short Story | 8 comments
အချိန်ကား..ည ၇ နာရီ ကျော်ခန့်။
နေရာကား….မန်းတလေး မိန်းပေါက်ရှိ နာမည်ကြီး လဘက်ရည်ဆိုင်ရှေ့။
ချာတိတ် နှစ်ယောက် ၊ လျှို လျှို တိတ်တိတ် ဖြင့် ၊ ဆိုင်တွင်း သို့ ကျီးကန်းတောင်မှောက် ကြည့်နေကြသည် ။
တစ်ယောက် က သူတို့ စီးလာသည့် စူပါကပ် ဆိုင်ကယ်ပေါ်တက်ကာ စက်နှိုးလိုက်သည် ။
တစ်ယောက် က လဘက်ရည်ဆိုင် အတွင်းသို့ ကြည့်နေဆဲ ။
သူတို့ ဘေးနားတွင် ရပ်ထားသည်မှာ ယာမဟာ အာစတပ် 97 အလန်းလေး ။
ဆိုင်ကယ်ပေါ်မှ တစ်ယောက် က ၊ လက်မထောင်ပြလိုက်သည် ။ အိုကေပြီ ဆိုတဲ့သဘော ။
အာစတပ် ဆိုင်ကယ်ဘေးတွင် ရပ်နေသော ချာတိတ် သည် ၊ ရုတ်ကနဲ…
လက်ထဲကိုင်ထားသော ဘလိတ်ဓါးလေးဖြင့် အာစတပ် ဆိုင်ကယ် ၏ ရှေ့ ကာဗာ ( ရေတိုင်ကီ ကာဗာ )စတစ်ကာ ကို ကောက်လှီးလိုက်သည် ။
သွားရော…..ငွေ တစ်သိန်း နီးပါး …။
ခပ်တည်တည်နှင့် စူပါကပ် ဆိုင်ကယ်ပေါ် တက်ခွကာ ၊ နှစ်ယောက်သား အမြန်မောင်းထွက်သွားကြသည် ။
သူတို့ မသိလိုက်သည် မှာ ၊ လဘက်ရည်ဆိုင်မှ စားပွဲထိုးလေး က သူတို့ နှစ်ယောက်ကို သေချာစွာ ကြည့်နေခြင်း ပင် ။
စားပွဲထိုးကောင်လေး သည် ဆိုင်တာဝန်ခံ ကို သွားပြီး ဖြစ်ပုံ ကို ပြောလိုက်တော့ ၊ တာဝန်ခံ က ဆိုင်ကယ် နံပါတ် ကို အော်ကာ ပိုင်ရှင် ကို သတိပေးလိုက်သည် ။
အာစတပ် ပိုင်ရှင် မှာ လည်း ချာတိတ်တစ်ယောက်ပင် ဖြစ်သည် ။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား တစ်ဦး ။
သူ့ နာမည် က မင်းမင်း ။
ဆိုင်ကယ် ၏ ရှေ့ စတစ်ကာ မှာ ပြဲနေချေပြီ ။
သည်ဆိုင်ကယ်တွေ က အော်ရီဂျင်နယ် စတစ်ကာ လိုချင် လျှင် ၊ ဝမ်းဆက် လိုက် ဝယ်ရသည် ။
ဒါတောင် စင်ကာပူ က မှာရသည့် စတစ်ကာ သာ ရနိုင်သည် ။ တန်ဘိုးကား သုံးသိန်းကျပ် ကျော် ခန့် ရှိသည် ။
အာစတပ် ပိုင်ရှင် မှာ တော်တော်လေး ကြေကွဲသွားသည် ။ မခံမရပ်နိုင်လောက်အောင် လည်း ဒေါသထွက်နေပြီး တဆတ်ဆတ် တုန်နေသည် ။
စားပွဲထိုးလေး ကတော့ ၊ ဘလိတ်ဓါး ဖြင့် လှီးသွားသော ချာတိတ် ကို မှတ်မိလိုက်ကြောင်း ၊ ဆိုင်ကယ် နံပါတ်တော့ မမှတ်လိုက်ရကြောင်း ပြောပြနေသည် ။
ထိုစဉ်…ယာမဟာ ဒီတီ (ဒို) ၃ စီး သည် လဘက်ရည် ဆိုင် ရှေ့ သို့ရပ်လာသည် ။
သုံးစီးလုံး နံပါတ်တစ်ခု မှ တပ်မထား ၊ ပါဝါ အိတ်ဇော တွေ တပ်ထားကြသည် ။
ဆိုင်ကယ် ကို ဂျန်ပင်း ( jumping ) ကစားသည့် ပုံစံ များ ။ လူပုံများ က ခပ်မိုက်မိုက် ၊ လက်ရဲ ဇက်ရဲ ပုံများဖြင့် ။
ဆိုင်ကယ်ပေါ် မှာ လူငယ် သုံးယောက် ဆင်းလာပြီး ၊ မင်းမင်း ၏ အဖြစ် ကို တွေ့ ရှိသွားကြသည် ။
မင်းမင်း နှင့် အတူ လဘက်ရည် ဆိုင်ထဲ တွင် စကားထိုင်ပြောဖြစ်သွားကြသည် ။
“ ဟယ်…သားလေး ၊ ကျော်ကျော် ၊ အမေ မင်းဘောင်းဘီ လျှော်တော့ ၊ ဒီဘလိတ်ဓါး လေး ကို တွေ့ တယ် ၊ ဒါဘာလုပ်မလို့ ထည့်ထားတာလဲ ဟင် ”
“ ဟာဗျာ…အမေကလည်း ၊ သားကျောင်းမှာ ခဲတံတွေ ဘာတွေ ချွန်တဲ့ အခါကြ သုံးတာပေါ့ ၊ ရစ်တယ်ဗျာ ”
“ ဟဲ့..မင့်အရွယ်က ခဲတံ ကိုင်ရသေးလို့ လား ဟဲ့ ”
“ ပရက်တီကယ် လုပ်ရင် လိုတယ်လေ…အမေကလဲ…ဘာမှလဲ မသိဘဲနဲ့၊ ပေးပေး..သားဟာ ”
“ အော်..အေးပါကွယ် ၊ ငါ့မလဲ ဘလိတ်ဓါးကိုင်တဲ့ ၊ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကြီးရှိမှန်း အခုမှ သိရတော့တယ် ဟေ့ ”
ကျော်ကျော် တစ်ယောက် အိမ်ထဲ မှ ထွက်လာခဲ့သည် ။ မိခင်ကို လည်း ..စကားရှည်ရန်ကော ဟု ဘုတောခဲ့ကာ ၊ သူ့ သူငယ်ချင်း မောင်လတ် အဆောင် သို့ ထွက်လာခဲ့သည် ။
အဆောင် မှာ လူစုံနေသည် ။ မောင်လတ် ၊ ကျော်ကျော် ၊ ထွန်းထွန်း ။
သူတို့ သုံးယောက် က မေဂျာတူ သူငယ်ချင်းများ ။ မောင်လတ်နှင့် ထွန်းထွန်း တို့ က နယ်မှ လာ ကျောင်းတက်သူ များ ။
ဆိုင်ကယ် မရှိကြ ၊ မိဘများက မဝယ်ပေးနိုင် ၊ ကျော်ကျော် က စိမ်းပုပ်ရောင် ဟွန်ဒါစူပါကပ်လေး နှင့် ။
ကျော်ကျော့်မိဘ တွေ က အရောင်းအဝယ် သမားတွေ ဖြစ်ပြီး ၊ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား ကျော်ကျော့် ကို ဆိုင်ကယ် ဝယ်ပေးထားသည် ။
ကျော်ကျော် တစ်ကယ် စီးချင်သည် က ယာမဟာ ဒီတီ (ဒို) ယောက်ျားစီးဘီး ဟု ခေါ်သည်။ အိမ်က မဝယ်ပေးသဖြင့် ၊ စိတ်ထဲတွင် မခံရပ်နိုင်ဖြစ်နေသူ ။ မကျေမနပ်ဖြစ်နေသူ ။
ဒို၊ အာစတပ် ဆိုင်ကယ်များ စီးသော လူငယ်များကို မြင်လျှင် ၊ မနာလို ဖြစ်နေသူ ။
မောင်လတ် နှင့် ထွန်းထွန်း တို့ ကား ပိုဆိုးသည် ။ ဆိုင်ကယ် မရှိကြရှာတော့ ၊ ဆိုင်ကယ်စီးတဲ့ လူငယ်မှန်သမျှ ၊ သူ တို့ ရန်သူလို သဘောထားသည် ။
သူတို့ ကို ကြောနေသလို ခံစားကြသည် ။
စိတ်တူ သူငယ်ချင်း သုံးယောက်ပေါင်းမိသွားတော့ ၊ မကောင်းမှု ကို ပူးပေါင်း ကျူးလွန်ကြတော့သည် ။
အာစတပ် ၊ ဒိုများ ကို လိုက်လံ ဘလိတ်ဓါးဖြင့်လှီးသည် ။ ဆိုင်ကယ် ဆီတိုင်ကီ အဖုံး ၊ ရေတိုင်ကီ အဖုံး ၊ 2T ဘူးအဖုံး များကို လိုက်လံ ဖြုတ်ယူကာ လွှင့်ပစ်ကြသည် ။
ဘာမှ လည်း မဟုတ် ၊ အရည်မရ အဖတ်မရ သည့် အပြင် ၊ ပြဿနာ အလွန်များနိုင်ကြောင်း ၊ သူတို့ မသိကြသေး ။
ဆယ်ကျော်သက် အရွယ်လေးတွေ ရှိသေးတော့ ၊ ဒီလို လုပ်ရတာ ကို စွန့် စားမှုကြီး တစ်ခု လို သဘောထားနေကြသည် ။
ယခု လည်း ၊ ပြီးခဲ့သော တစ်ပတ် က ကျော်ကျော် နှင့် မောင်လတ် နှင့် လုပ်ခဲ့ကြသော ၊ ဓါးလှီးခြင်း ကို ထွန်းထွန်းအား ပြန်ဖောက်သည် ချနေကြသည် ။
ထွန်းထွန်း လည်း ၊ သူတို့ စကားအဆုံး ၊ “ ကောင်းတယ်ကွာ ” ဟုဆိုကာ ထအားပေးသည် ။
သူတို့ ကျူးလွန်ခဲ့သော လဘက်ရည် ဆိုင် ကို သဘောကျမိသွားသည် ။ သူတို့ လုပ်တာ ကို ဘယ်သူ မှ မမြင်ဟု ထင်သွားကြကာ ။
သုံးယောက်ပေါင်း ထပ် ကျူးလွန်ကြဖို့ ၊ မတိုင်ပင် ပဲ နှင့် ချီတက်ခဲ့ကြပြန်သည် ။
ပြီးခဲ့သည့် တစ်ပတ် က ထိုင်ခဲ့သော လဘက်ရည် ဆိုင် ရှေ့ တွင်ပင် ဆိုင်ကယ် ထိုးလိုက်သည် ။ မိန်း ( တက္ကသိုလ် ) ပေါက်နား က လဘက်ရည်ဆိုင်ကြီး ။
ထွန်းထွန်း ၊ မောင်လတ် ၊ ကျော်ကျော် သုံးယောက်သား ၊ လဘက်ရည် ဆိုင်အပေါက်ဝ နားရှိ စားပွဲတွင် ဝင်ထိုင်ရင်း ရပ်ထားသော ဆိုင်ကယ် များ ကို ကြည့်နေကြသည် ။
သူတို့ သတိမထားမိသည် မှာ ၊ လဘက်ရည်ဆိုင်အတွင်းဘက်သို့ ပြေးဝင်သွားသော စားပွဲထိုးလေး ။
“ အကို…သူတို့ ပြန်ရောက်လာပြီ ၊ ဆိုင်ပေါက်ဝ ညာဘက်နား က ဝိုင်းမှာ အခု ထိုင်နေကြတယ် ၊ ဒီတစ်ခါ သုံးယောက်ဗျ ”
“ အေး..ကောင်းပြီ ၊ မင်းတော်တယ်ကွာ ၊ ရော့ မုန့် ဖိုး ၁၀၀၀ ယူလိုက် ”
“ အကိုတို့ ..ဆိုင်ထဲ မှာတော့ ရန်မဖြစ်ကြပါနဲ့ နော် ၊ ကျွန်တော် တို့ ဆိုင် အပိတ်ခံရမှာ စိုးလို့ ပါ ”
စားပွဲထိုးလေး က စိုးရိမ်တကြီးတောင်းပန်လာသည် ။ သူတောင်းပန်လိုက်သော သူမှာ ….
“ဂုရု” သည် ၁၀တန်းကျောင်းသား ကတည်း က ကျားစီးဆိုင်ကယ် များ ဖြင့် လမ်းပေါ်တွင် ပျော်မြူးခဲ့သူ ။
ယာမဟာ ဒီတီ ဆိုင်ကယ်များ ဆိုလျှင် သူ အရမ်းနှစ်သက် သဘောကျသည် ။ ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်လည်း စီးတတ်သည် ။
သူစီးသည့် ဆိုင်ကယ်မှာ ယာမဟာ ဒီတီ ၁၂၅ (ဒို) ။
သူ တက္ကသိုလ် တက်တော့ ၊ သူ့ လို ဒို ၊ အာစတပ် စီးသော ကျောင်းသား များ နှင့် ခင်မင်သွားသည် ။
သူတို့ သည် အဖွဲ့ ဖွဲ့ ထားကြသည် ။ ညနေတိုင်း မန်းတလေး တောင်ခြေ တွင် ဆိုင်ကယ်ရှေ့ ဘီးထောင် ကျင့်ကြသည် ။
အသိ မင်္ဂလာဆောင် ပွဲ များ တွင် ၊ သတို့ သား၊သတို့ သမီး ကားရှေ့ မှ ၊ ဆိုင်ကယ် စတန့် ပြကြသည် ။
ယခု တစ်လော ၊ ဂျန်ပင်း ( jumping ) ကျားစီး ဆိုင်ကယ်များ ၊ ဒီတီ များ ၊ အာစတပ် များ ၊ ဖျက်လို့ ဖျက်စီး လုပ်ခံ နေရသည့် သတင်းပျံ့ နှံ့ နေသည် ။
ဂုရု အဖွဲ့ ထဲ မှ ၊ အာစတပ် ၂ စီး ဓါးဖြင့် လှီးခံလိုက်ရသည် ။ ဒို တစ်စီး 2T ဘူး အဖုံး အခိုးခံလိုက်ရသည် ။
ထို့ အတွက် ၊ ဂုရု နှင့် ကျန်အပေါင်းအသင်း များ မှာ လွန်စွာ ခံပြင်း ဒေါသ ဖြစ်ကြရသည် ။
တရားခံ မှာ..တက္ကသိုလ် နယ်မြေ တစ်ဝိုက်တွင် လိုက်လံ လှုပ်ရှားနေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ၊ သူတို့ ခန့် မှန်းမိကြသည် ။
ပြီးခဲ့သည့် တစ်ပါတ် တုန်းက ၊ သည်လဘက်ရည် ဆိုင်မှာ ၊ အာစတပ် တစ်စီး ဓါးဖြင့် အလှီးခံ လိုက်ရသည် ။
စားပွဲထိုးလေး က မှတ်မိလိုက်သည် ဟု ဆိုထားသဖြင့် ၊ သူတို့ အဖွဲ့ တွေ လူခွဲကာ နေ့ စဉ် လာစောင့်နေကြခြင်း ဖြစ်သည် ။
ယခု မူ ..ထိပ်တိုက် တိုးချေပြီ ၊ ဂုရု တို့ က ၅ ယောက် ထိုင်နေခြင်း ဖြစ်သည် ။ တစ်ယောက် ကို အပြင်သို့ ချက်ချင်း လွှတ်လိုက်သည် ။
ကျန်အဖွဲ့ သားများ ကို ဆိုင်ကယ် အနောက်အိတ်ဇောများထဲ တွင် ထည့်ထားသော ဓါးများ အသင့် ဖြစ်မဖြစ် မေးလိုက်သည် ။
ကျော်ကျော် ၊ မောင်လတ် နှင့် ထွန်းထွန်း တို့ သုံးယောက် ၊ ကျော်ကျော် က လဘက်ရည် ဆိုင်ထဲ သို့သေချာ ကြည့်နေသည် ။
ထွန်းထွန်းက ဆိုင်အပြင်ဘက်ရှိ ရပ်ထားသော ဆိုင်ကယ်များ ထဲ မှ ၊ ဒို ၃ စီး ကို လှမ်းကြည့်နေသည် ။
သည်နေ့ ည က သူလက်စွမ်းပြရမည့် အလှည့် ။ သူ လုပ်အပြီး ၊ အလွယ်တကူ ထွက်လို့ လွယ်မလွယ် သေချာထိုင် ကြည့်နေသည် ။
လမ်းကြောင်း က သင့်နေသည် ။ ရပ်ထားသော ဒို၃ စီးကား ၊ သူတို့ စီးလာသော ဆိုင်ကယ် ၏ ဘယ်ဘက် ၃ စီးကျော်တွင် ရှိသည် ။
သူ ဘလိတ်ဓါး အစွမ်းပြပြီး ၊ ကျုံးဘက်သို့ မောင်းထွက်ကြရန် ကျော်ကျော် က စီစဉ်ထားသည် ။
ထွန်းထွန်း တစ်ယောက် အခြေအနေ ကို ကြည့်အပြီး ၊ ကျော်ကျော့် ဘက်သို့ လှည့်ကာ ခေါင်းညိတ် အချက်ပြလိုက်တော့သည် ။
ကျော်ကျော်တို့ ၃ ယောက် ပိုက်ဆံရှင်းပြီး ၊ ဆိုင်ပြင်ဘက် သို့ ထွက်လာကြသည် ။ ဂုရု တို့ က လည်း ဆိုင်ပေါက်နား သို့ ထွက်လာသည် ။
ကျော်ကျော်က ဆိုင်ကယ် စက်နှိုးထားပြီး ၊ မောင်လတ် က အလယ်မှာ ထိုင်နေသည် ။ ထွန်းထွန်းက ဒိုတစ်စီးနားသို့ ကပ်လိုက်သည် ။
ဂုရု တို့ အဖွဲ့ ထဲ က တစ်ယောက် က
“ ဟိုမှာ…ဒီခွေးကောင်တွေ မင်း ဆိုင်ကယ် ကို လုပ်တော့မယ် ၊ လုပ်ဦးဂုရု…”
“ လုပ်စမ်းပါစေ ၊ နေဦး ၊ အဲ့ကောင် လုပ်ပြီးလို့ ဆိုင်ကယ် ထွက်တာ နဲ့၊ ငါတို့ တန်းလိုက်မယ် ၊ အသင့်ပြင်ထား ”
ထွန်းထွန်းသည် ဂုရု ၏ ဒိုနားသို့ ကပ်ကာ ၊ ဘလိတ်ဓါးလေးဖြင့် ဆိုင်ကယ် ဖင်ထိုင်ခုံ အရေ ကို အရှည်ကြီး လှီးလိုက်လေတော့သည် ။
ယာမဟာ ဒီတီ(ဒို) ၏ ဖင်ထိုင်ခုံ အော်ရီဂျင်နယ် သားရေ လေး ပြဲသွားပြီ ။ တန်ဘိုး ငါးသောင်းကျပ် ခန့် ရှိသည် ။
ပြီးပြီးချင်း ၊ စူပါကပ် ဆိုင်ကယ်လေး ၏ နောက်ဆုံးမှာ ထွန်းထွန်း ခွတက်လိုက်ပြီး ၊ ကျော်ကျော်က အမြန်မောင်းထွက်လာခဲ့သည် ။
ဂုရု တို့ ၅ ယောက် လည်း ဒို ၃ စီးပေါ် အမြန် တက် ၊ စက်နှိုးကာ ချက်ချင်း ကျော်ကျော်သို့ နောက်သို့ လိုက်လေတော့သည် ။
ထွန်းထွန်း က စိတ်မချစွာဖြင့် ၊ အနောက်ဘက် သို့ တစ်ချက် လှည့် အကြည့် ၊ ဂုရု တို့ ဆိုင်ကယ် ၃ စီးလုံး ၊ တရကြမ်း မောင်းလိုက်လာသည် ကို တွေ့ မြင်လိုက်ရတော့လေသည် ။
“ ဟာ…ကျော်ကျော် ၊ လိုက်လာကြပြီ ၊ မောင်း….မောင်းတော့..မြန်မြန် ”
ကျော်ကျော် လည်း ကြောက်လန့် သွားပြီး မိန်းလမ်း တစ်လျှောက် မှ ၊ ကျုံးဘက်သို့ အမြန်မောင်းပြေး လာခဲ့သည် ။
၃၅ လမ်း ထောင့် တွင် ဂုရုတို့ အဖွဲ့ ထဲ ၊ နောက်ထပ် အာစတပ်များ နှင့် ဒိုများ ထပ်မံ ပေါင်းလာခဲ့သည် ။ အားလုံးပေါင်း ၈ စီး ။
မောင်းကြ ရင်း အရှေ့ ဘက်ကျုံး ၊ နန်းရှေ့ တံတား အကျော်တွင် ၊ ကျော်ကျော် တို့ ကို မှီသွားသည် ။
“ ဟေ့ကောင်တွေ ရပ်စမ်း ….”
ကျော်ကျော်တို့ က မရပ် ၊ တရပ်ကြမ်း ဆက်မောင်းပြေးသည် ။
ကျော်ကျော်တို့ ဆိုင်ကယ်လေး က ဟွန်ဒါစူပါကပ် အင်ဂျင်ပါဝါ 90 သာ ရှိသည် ။ ၃ ယောက်စီးထားသည် ။
ဂုရုတို့ ယောက်ျားစီး ယာမဟာ များက အင်ဂျင်ပါဝါ 125 ၊ ဘယ်လို လုပ် လွတ်မည်နည်း ။ နောက်ပြီး သူတို့ က တစ်စီး ၂ယောက် ။
ဆိုင်ကယ် အနောက်မှ ပါသော ချာတိတ်များသည် ၊ အနောက်အိတ်ဇောကြားထဲ မှ ၊ ကင်တို ဓါးတို များ ကို အသီးသီး ဆွဲထုတ်လိုက်ကြသည် ။
“ ဟေ့ကောင်တွေ ရပ်နော် ”
ကျော်ကျော်တို့ က မရပ် ။ ဂုရု က ပထမ ဆုံး ကျော်ကျော့် ဆိုင်ကယ် ဘယ်ဘက် သို့ ကပ်လိုက်ပြီး ၊ အနောက်ဆုံး တွင် ထိုင်နေသော ထွန်းထွန်း ပုခုံးကို လှမ်းခုတ်လိုက်သည် ။
မထိ ၊ ထွန်းထွန်း က ကြောက်လန့် တကြားဖြင့် ၊ အော်လိုက်သဖြင့် ၊ ကျော်ကျော် က ညာဘက်သို့ ဆွဲချလိုက်သောကြောင့် ။
ဂုရုက “ ကောင်းပြီလေ..မင်းတို့ ဘယ်အထိ ရှောင်နိုင်မလဲ..ကြည့်သေးတာပေါ့ ”
ဒီတစ်ခါ ၊ ဂုရုတို့ အဖွဲ့ ထဲ မှ တစ်စီးက ကျော်ကျော် တို့ ဆိုင်ကယ် ရှေ့ မှ ပိတ်မောင်းလိုက်သည် ။
ဂုရု က ထပ်မံ ခုတ်သည် ။ ဒီတစ်ခါတော့ ထွန်းထွန်း ပုခုံးသားပေါ် ထိထိမိမိ ခုတ်မိသွားသည် ။
“ အားးးး….ကျော်ကျော်ရေ လုပ်ပါဦး ၊ ငါ့ပခုံး ထိသွားပြီ ”
“ ဟာ…ခဏတောင့်ကွာ ၊ ငါလွတ်အောင် မောင်းပြမယ် ”
အရှေ့ မှာ ပိတ်မောင်းသော ဆိုင်ကယ် က ၂ စီး ဖြစ်လာသဖြင့် ၊ ကျော်ကျော် လွတ်လပ်စွာ မောင်းမရတော့ ။
ဒီတစ်ခါ ဓါးချက် က ကျော်ကျော့် ဘယ်လက်ဖျံပေါ်သို့ ကျလာသည် ။
ဂုရု သည် ဓါးချက် ကို အားမလွန်စေရန် ၊ သတိထားခုတ်သည် ။
ထိသွားပြီ ၊ ကျော်ကျော့်ဘက်လက် ပေါ် သို့။ ကျော်ကျော် ကြောင်သွားပြီး ၊ ဆိုင်ကယ် လက်ကိုင် ကို လက်နှစ်ဘက်လုံး လွှတ်မိသွားသည် ။
ကျော်ကျော် တို့ စူပါကပ်လေး ၊ ညာဘက်သို့ လက်ကိုင် ခေါက်ပြီး မှောက်သွားသည် ။
ဂုရုတို့ လည်း ဆိုင်ကယ်များ ကို ရပ်လိုက်ပြီး ၊ ကျော်ကျော် တို့ ကို ဝိုင်းထားလိုက်သည် ။
ကျော်ကျော် ၊ မောင်လတ် နှင့် ထွန်းထွန်း တို့ လဲရာ မှ လူးလှိမ့် ထလိုက်ကြပြီး ၊ ကျော်ကျော် က နာကျင်စွာဖြင့်
“ မင်းတို့ တွေ…မတရားမလုပ်နဲ့ နော် ၊ ဒါ..မင်းမဲ့ တိုင်းပြည် မဟုတ်ဘူး ကွ ”
ဂုရု က ကျော်ကျော့် ခေါင်းကို ဝင်ခုတ်သည် ။ ညာလက်ဖြင့် ကာလိုက်သဖြင့် ၊ ညာဘက်လက် ပေါ်သို့ ဓါးချက် က ကျသွားပြီး ညာလက် ထိသွားသည် ။
ယခင် တစ်ပါတ် က ကာဗာသားနှင့် စတစ်ကာ သား အလှီးခံလိုက်ရသူ မင်းမင်း က ၊ လှီးသွားသူ မောင်လတ် ကို အနောက် မှ ဝင်ခုတ် လိုက်သည် ။
မောင်လတ် ဇက် ပေါ်သို့ တစ်စောင်းကျ ကာ ၊ ဇက်ပြဲသွားသည် ။
“ အားးးးး….မလုပ်ကြပါနဲ့ တော့ ၊ တောင်းပန်ပါတယ် ၊ ကျွန်တော် တို့ တောင်းပန်ပါတယ် ”
“ ဟားဟားဟားဟား…အခု မှ တောင်းပန်တယ် ဟုတ်လား ၊ မင်းတို့ တွေ ၊ ငါတို့ ဆိုင်ကယ်တွေ ကို ဖျက်လို့ ဖျက်စီး လုပ်တုန်းက ဒီသောက်ခွက်တွေ မဟုတ်ပါဘူး ”
“ တစ်ကယ်တောင်းပန်ပါတယ် ဗျာ ၊ ကျွန်တော် တို့ လုပ်ခဲ့သမျှ ကို ပြန်အလျော်ပေးပါ့မယ် ”
“ အလျော်လို ချင်လို့ များ မင်းတို့ နောက် လိုက်လာတယ် ထင်နေလား ကွ ၊ မင်းတို့ ကောင်တွေ ဓါးနဲ့ လှီးသွားသလို ၊ ငါတို့ က ပြန်လှီးချင်လို့လိုက်လာတာ…သိပြီလား ”
ကျော်ကျော် တို့သုံးယောက် သွေးတရဲရဲ ဖြင့် ဖြစ်သွားကြသည် ။ တစ်ယောက် ကို နှစ်ချက်စီ အခုတ်ခံ လိုက်ရ အပြီး ၊
“ မင်းတို့တွေ မကျေနပ်ရင် ၊ ရဲတိုင်ချင် သွားတိုင် ၊ အေး…ငါတို့ အဖွဲ့ အပြင် ၊ မင်းတို့ လုပ်ခဲ့တဲ့ ဆိုင်ကယ်ပိုင်ရှင်တွေ ကို ၊ မင်းတို့ တွေ ပါဆိုတာ အမည်ဖော်ရဲ ရင် တိုင်ပေါ့ကွာ ….. ဟားဟားဟားဟား ”
ဂုရုတို့ အဖွဲ့ ပြန်ထွက် သွားကြသည် ။
ကျော်ကျော်တို့ လည်း ၊ ဓါးဒဏ်ရာ များ ကို အင်းကျီများ ဖြင့် စည်းလိုက်ကြပြီး ၊ ဆိုင်ကယ်ကို ပြန်ထောင်ကာ ၊ အဆောင် သို့ ပြန်လာခဲ့ကြသည် ။
အဆောင်ရောက်မှ ၊ အဆောင် ပိုင်ရှင့် ဆီ မှ ပိုက်ဆံချေးကာ ၊ နီးရာ ဆေးခန်း သို့သွားပြကြရသည် ။
တစ်ယောက် လျှင် အချက် ၂၀ ခန့် စီ ချုပ်လိုက်ကြရသည် ။
နောက်တစ်ရက် ကြ ကျော်ကျော် အိမ်တွင် အနာရှိန်ကြောင့် အဖျားတက်တော့သည် ။
ကျော်ကျော့် အမေ က သိသွားပြီး ၊ ဘယ်လို ဖြစ်လာလဲ မေးသောအခါ ၊ ကျော်ကျော့် ခဗျာ မဖြေရဲ ပါ ။
“ မသိချင်စမ်းပါနဲ့ ၊ အမေရာ ၊ သားကို ချစ်ရင် ထပ်မမေးပါနဲ့ တော့နော် ” ဟုသာ ။
သူ တို့ လိုက် ဖျက်လို့ ဖျက်စီး လုပ်ခဲ့သည် မှာ ၊ ဆိုင်ကယ်ပေါင်း မနည်းတော့ ၊ ဂုရုတို့ အဖွဲ့ အပြင် တစ်ခြား အဖွဲ့ များကပါ သိသွားလျှင် ၊
ကျော်ကျော် ထပ်မတွေးရဲ ၊ မခံစားရဲတော့ ။
သူ တို့ ၃ ယောက် ၏ မိုက်ပြစ် ၊ ဘလိတ်ဓါး အစွမ်း အကျိုးကျေးဇူးကို ကင်တို ဓါးစွမ်း ဖြင့် ၊ ကောင်းကောင်းကြီး ခံစားလိုက်ရပြီ မဟုတ်ပါလော ။
၂၀၀၀ ခုနှစ် ခန့် က ၊ မန်းတလေးမြို့ တက္ကသိုလ် (မိန်း) နားတစ်ဝိုက် ဖြစ်ခဲ့သည် ၊ ဖြစ်ရပ်မှန် ကို အခြေခံရေးထားခြင်း ဖြစ်ပါသည် ။
စိတ်လိုက်မာန်ပါတော့ မဖြစ်စေနဲ့ ..
ဒီခေတ်ကြီးမှာ လုပ်ရလဲ မကောင်းဘူး..ခံရလဲ မကောင်းဘူး..
အိမ်က..လူကြီး..တွေမျက်နှာ ငဲ့ကြဦးကွဲ့ ..
ခုလဲရှိသေးတယ်ဗျ အဲဒီလိုမျိုးနည်းနည်းဆင်တဲ့လူယုတ်မာတွေ ။ မိန်းကလေးတွေစီးလာတဲ့ဆိုင်ကယ်တွေရပ်ထားရင် မောင်သူထိုင်ခုံအလယ်တည့်တည့်မှာ သွားကြားထိုးတံကို အဖျားလေးပေါ်ယုံစိုက်ထားခဲ့တယ် ။ ဆိုင်ကယ်ပိုင်ရှင်မိန်းကလေးပြန်လာလို့ တက်စီးရင် စဉ်းစားသာကြည့်တော့ ။ မိန်းကလေးဆိုတော့ လူကြားထဲမှာလဲ အဲဒီဆူးကြီးကိုရှာပြီးနုတ်မနေချင်တော့ဘူးလေ ။ အရမ်းရှက်တာပေါ့ ။ အဲဒါနဲ့ပဲ ကြိတ်မှိတ်ပြီးစီးကြရတယ် ။ တစ်ကယ်ပါဗျာ ရက်စက်လွန်းတဲ့သူတွေ ။
မန်းမှာတော့ မသိဘူး ရန်ကုန်မှာတော့ လူတယောက် ကားထဲမှာ ကချင်ဓါး အရှည် တချောင်းတွေ့ဖူးတယ်။ ဘာကြီးလဲလို့ ဆွဲထုတ်လိုက်တာ ဓါးကြီး.. မေးလိုက်တော့ ညရေးညတာ အရေးပေါ် လိုရင် သုံးဖို့တဲ့.. ဘာမှလည်း မဆိုင်ဘူး အဲလို လိုက်ခုပ်ဖို့ထင်တယ်။
ဆိုင်ကယ်ပစ္စည်းရောင်းတဲ့ ဆိုင်တွေက လုပ်ခိုင်းတာရော မဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ ရန်ကုန်မှာ ကားပစ္စည်း အခိုးခံရသူတွေက ဆိုင်တွေမှာ သွားမှာထားရတယ်။ အဲဒီဆိုင်တွေကလည်း သူခိုးလက်ခံပစ္စည်းနဲ့ လုပ်စားကြတယ်။ ဒီလိုနဲ့ သံသရာ လည်နေရော။
အဲတာက တကယ်တမ်းပြောရရင် အငုံ့စိတ်ကြောင့် သူများပစ္စည်းကိုဖျက်ဆီးချင်စတ်ပေါ်လာတာလေ။
အိုး ….ရင်တဖိုဖို သည်းတထိပ်ထိပ်နဲ. အဆုံးထိအောင် ဖတ်လိုက်ရတာ ဖြစ်၇ပ်မှန် သည်းထိပ်ရင်ဖို ၀တ္ထု
မိုက်ရူးရဲ လူငယ်လေး တွေရဲ. ရမ်းကားမှူ အဆုံးသတ်က” ကိုယ်တွေ.သင်ခန်းစာ”
ရသွားကြတယ်ပေါ.။ကောင်းပါတယ် ”ကိုယ်တိုယ်ထိမှ သိတော့ တယ်” ပေါ.။
လူငယ်တွေ အသိဥာဏ်ရှိရှိ နဲ.ကိုယ့် ကို ကိုထိန်းထိန်း သိမ်းသိမ်း နေထိုင်တတ်ဖို့လူ ကြီးတွေမှာ
လည်း ဆုံးမဖို. တာဝန်ရှိပါတယ်။
ကောင်းပါတယ် ။ ဖြစ်ရပ် တစ်ခုကို ဒီလို စိတ်ဝင်စားအောင်ရေးနိုင်တာကို ပဲချီးကျူးသွားပါတယ်နော့ ။
အကြီးအကျယ်.. ရှင်သန်လာမှာက… ဂိုဏ်းတွေပဲ..။
မြန်မာပြည်လို.. လက်နက်ကိုင်တွေ..လက်ကျင့်သားရနေသူတွေပေါတဲ့ တိုင်းပြည်မျိုးဆို.. တော်တော်ကို.. ကြမ်းကြမ်းတွေဖြစ်မှာပဲ..။
ဂိုဏ်းတွေအချင်းချင်း.. အားပြိုင်ရင်း.. အခြေကျတဲ့..ဒီမိုကရေစီဖြစ်သွားလိမ့်မယ်..။